Ogaden News Agency (ONA) – Umado xornimo doon ah sida ree Ogadenya ayaa Caalamka hadheeyay! By- Xaaji M/rashiid.
Umado xornimo doon ah sida ree Ogadenya ayaa Caalamka hadheeyay! By- Xaaji M/rashiid.
Posted by Daljir	/ November 1, 2017
Waxaa la joogaa Duni laga dheehanayo xaalado cajiib ah markaad si buuxda Dhagaha ula raacdo Indhahana ku daawato waxa dhacaya. Aadama waxaa abuurtya Rabiga dhabta ah, wuxuuna kula dardaarmay inay isu naxariistaan, isla markaana ay dhulka dushiisa ka ilaaliyaan wixii fasaad ah. Waxaa dhacda in mararka qaar ay dunidu ku naalooto barwaaqo iyo daganaasho wanaagsan sida ku cad sooyaalka taariikhda, taasoo ku timaadda xuquuqaha oo la isa siiyo ama dulmiga oo la iska ilaaliyo.
Meesha ay Sartu ka qudhuntay waa Xafiisyada guud ee dunida iyo cidda fadhida ee loo idmaday caqiidada uu doono ha haystee. Hadaan dib u xasuusiyo akhristayaasha waxaa jiray Nin Afrikaan ahaa oo la odhan jiray Boqor Najaashi oo Geeska meelo kamid ah katalin jiray. Sabankaas waxaa Magaalada makka ka jiray dulmi kii ugu xumaa isagoo xaadir yahay Nabi Muxmamed SCW- Waxayna ku kaliftay inuu amro dadkiisa inay u qaxaan xaggaa iyo Geeska iyo goobta uu maamulayo Boqor Najaashi, isagoo ku sifeeyay inuu yahay nin aan agtiisa cidna lagu dulmin.
Caalamkan aynu hadda joogno waxaa masuuliyad xumada ka dhacday iska leh kuwo fadhiya Golaha ay umaduhu ku midoobeen. Waxaa xafiiskooda biyo dhigtay munaafaqnimo, isku dir iyo daawashada dhiiga qubanaya maalin kasta oo la joogo! Waxay intaaba kaga sii dareen beenta magoogan ee ay saxaafadda la hor taagan yihiin iyagoo ku andicoonaya inay dhibaatooyinka wax ka qaban doonaan, balse taa badalkeeda ay hubka hoosta isugu dhiibayaan bulshooyinka jaarka ah.
Waxaa caalamka hadheeyay mowjado xornimo doon ah sida ree ogadenya waxaana kamid ah Gobolka ree Burma oo diiday guumaysiga kooxda cawaanka ah ee Taageerada ka heysata meelo kale, waxayna kujiraan iska caabin xooggan, adoonsigana waxay ka doorteen geeri xalaal ah.
Waxaa kamid ah Gobolada xornimo doonka ah ree Kataloniya oo doorasho iskood ah qabsaday kadibna go’aansaday inay dhabarka u jeediyaan wadanka Spain intiisa kale. wali waxay wadaan iska caabin siyaasi ah hadiise la dayn waayo waxaa dhici karta inay hubka qaataan oy barafka ku dhex jabhadeeyaan!
Waxaa kale oo kamid ah Gobolka kurdistaan oo dadkiisa ka qaaday afti iyagoo isku raacay inay dabada u jeediyaan Ciraaq inteeda kale calankoodana ay hoos hadhsadaan. Taasi waxay keentay inay weerar ku qaaddo dawladda ay hogaaminayso Shiicada macangaga ah ee Baqdaad. si kastaba ha ahaatee waxaa kahor yimid iska caabin wali sii socota!
Shucuubta caalamka waxaa dhagahooda ku batay xuquuqul insaanka iyo xornimada xaq bay dadku uleeyihiin, hase yeeshee waa laga ilbaxay hadal afka laga sheegoo bulshooyinkuna waxay lasoo taagan yihiin itus oo itaabsii. Soomaalidii hore oo ilaahay xikmad siiyay ayaa tidhi- meel hoo u baahan Hadal wax kama taro!
Run ahaantii shucuubta dulmani way kasoo daaleen Erayda ay ka midka yihiin- Golaha amaanka ayaa shiray waxayna soo saareen go’aamo- Waxaa la dirayaa wafti soo baadha dambiyada gaboodfalka- Hebel wuxuu gaystay xasuuq aadamaha ka dhan ah ee waa in maxkamad la keenaa! Dal hebel waa in loo diraa ciidamo nabadda ilaaliya! Wadan hebel gaajaa ka dhacdee waan in gurmad degdeg ah loo fidiyaa! kkk kalmadahaas anigu waan ka noogaye idinku maka daasheen?!
Hadaan dhan walba iska taagay sida ugu dhow ee ay umadi xaqeeda ku heli karto ama ay ku xoroobi karto waxaan dhaafin waayay maah,maahdii soomaalida ee ahayd- Ruuxaan shantaadu ka celinin sharci kaama celiyo! Dad badan ayaa aaminay in Qalinka oo kaliya lagu soo dhicin karo dalkooda oo la haysto, balse way ku hongoobeen.
Umadda ree Ogadenya oo ah umad xaqiijisay jiritaankeeda waxay mudan yihiin ku dayasho, waana hubaa inay jiraan Qoowmiyadu kale oo halganka kaga dayday. Si kastaba ha ahaatee wadanka la isku karkaray ee loo yaqaano Atoobiya ayaa ah mid qarka usaaran in subaxuun dunidu soo toosto dabkii oo madow iyo Goobtii oo Qiiq ka baxayo, taasoo muujinaysa in la kala guuray oo qolo waliba horteeda u dhaqaaqday!
Waxaan kusoo khatimayaa warkayga Cid taageero la waydiisto ama la talo saarto Rabigeen ayaa ugu mudan, wixii intaa dheer waa erayada Halganka ee ah- Mintid, Midnimo iyo Isku tashi.
HEES WACAN- UMAD WALIBA AAYAHEEDA INAY TASHATO IYADAA LEEEE—
Guul & Gobanimo